Raharaha goavana momba ny zava-mahadomelina, Manasongadina ny fomba fanao feno fahendrena an’ny polisy ambony ao Trinidad & Tobago · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Mey 2019 5:07 GMT
Pikantsary avy tamin'ny lahatsary iray novokarin'ny Sampandraharahan'ny Polisy ao Trinidad sy Tobago, mampiseho ny Kaomiseran'ny polisy ao amin'ny firenena, i Gary Griffith, miresaka miaraka amin'ireo mpanao gazety any ivelan'ilay vondrom-piarahamonina mifefy ao Avaratra-Andrefan'i Trinidad, izay nanaovan'ny andiana polisy voatokana ny fandravàna zava-mahadomelina sy fitaovam-piadiana lazaina fa mitentina dolara an-tapitrisany maro.
Ny Talata 4 Desambra 2018, nanao fakàna zava-mahadomelina mitentina dolara an-tapitrisany maro tao amin'ny vondrom-piarahamonina iray mifefy tao Westmooring, toerana raitra iray fonenan'ny ngetroka ao amin'ny renivohitr'i Trinidad, Seranan'i Espana, ny Ekipa Misahana Manokana Momba ny Hetsika Miavaka (SORT), sampana iray vaovao avy ao amin'ny sampandraharahan'ny polisy ao Trinite sy Tobago.
Notarihin'ilay Kaomisera feno fahendrena vaovaon'ny Polisy, Gary Griffith, azonny polisy ireo basy tsy ara-dalàna sy bala maro ary olona dimy nisy ifandraisany tamin'ilay halatra no nosamborina. Tena noraisin'ny vahoaka tsara izay leo ny fiakaran'ireo heloka mahery setra ny fanendrena an'i Griffith tamin'ny volana Aogositra tamin'ity taona ity.
Iray tamin'ireo voasambotra nandritra ity hetsika ity i Krystiana Sankar, ny zanaka vavin'ny vadin‘i Stuart Young teo aloha, mpikambana ao amin'ny Parlemanta izay manana poketra roa goavana amin'ny maha-minisitry ny fiarovana nasionaly azy ary koa maha-minisitry ny serasera azy.
Rehefa nanomboka niresaka momba an'i Sankar amin'ny maha-”havan”ny minisitra azy ireo haino aman-jery tao an-toerana, namoaka fanambarana haingana i Young:
Tsy misy havako voasambotra izany. Havan'ny vadiko taloha ny tovovavy iray voasambotra.
Tsy misy fifampitohizana na fifandraisana amin'ilay tovovavy voaresaka eto ny tenako.
Hamafisiko tsara fa tsy misy na iza na iza ambonin'ny lalàna ary hiatrika ny vokany avokoa ireo rehetra mandika ny lalàna.
Teo am-piresahana tamin'ireo mpanao gazety teny amin'ny toerana nisehoan'ilay fakàna zava-mahadomelina, nilaza i Griffith fa “Na iza na iza ilay olona […] rehefa mandika ny lalàna ianao, ho tonga aho hikarakara izany.” Nanampy izy fa mikasa ny hanangoly ny varotra zava-mahadomelina tsy ara-dalàna ao Trinite sy Tobago izy, ary nanana hafatra ho an'ireo rehetra tafiditra tamin'izany raharaha izany – “Tapitra ny oran'ny fahasambarana.” Vetivety dia nirongatra tao amin'ny tambajotra sosialy izany fehezanteny izany.
Mijaly efa hatramin'ny taona maro noho ny lazany amin'ny filalaovana anjara asa ao anatin'ny varotra tsy ara-dalàna zavamahadomelina ratsy ilay firenena nosy kambana, miorina ao amin'ny farany atsimon'ny vondronosy Karaibiàna.
Nilaza ny tenany ho toy ny lehilahy mpanatanteraka i Griffith ary tena mitàna ny teniny marina izy. Nanaovany fanamby ireo olona nandefa fandrahonana ho faty, ohatra, ny ”ho avy hitady azy”, ary nihalasa mahakamo ny vonovorona tsy mitombna ataon'izy ireo. Nanamafy ny lazany ary nahatonga azy hahazo mpiankohoka kely mihitsy ny herim-pony, niteraka aingam-panahy ho an'ny hira dancehall iray nitondra ny lohateny hoe ”Ilay Kaomisera” mihitsy aza.
Talohan'ny nanondroana azy ho lasa polisy ambony, niasa teo ambany fitarihan'ny kaomiseran'ny polisy mpisolo toerana vonjimaika nandritra ny taona maro ny sampandraharahan'ny polisy tao amin'ny firenena. Teo ambanin'ny fitarihan'i Griffith, nahavita namaha heloka bevava maro ny polisy, ka isan'izany ireo fakàna an-keriny telo.
Fa nisy adihevitra koa tao anatin'izany.
Tao anatin'ny iray tamin'ireo fakana an-keriny ireo, navoakan'ny polisy ny sarin'ireo ahiahiany talohan'ny nanasaziana azy ireo. Ny herisetra nampiharin'ireo polisy tamin'ireo mpianatra mpanao fihetsiketsehana koa no nahatonga ny fomba fanaon'i Griffith ho notsikeraina toy ny “mpisetrasetra”.
Tao anatin'ny tranga iray niseho tamin'ny volana Oktobra, taorian'ny nahafaty tovolahy dimy tao anatin'ny fitifirana izay lazaina fa nifanaovan'izy ireo tamin'ny polisy, nametraka fanontaniana ireo olom-pirenena raha toa fihetsika nandika ny lalàna no nataon'ireo polisy ireo. Na nangatahan'ny Vaomieran'ny Sampandraharahan'ny Polisy aza ireo vavolombelona mba ho avy hanamoràna ny fanadihadiana mikasika ilay tranga, nilaza i Griffith fa nifanaraka tamin'ny nolazain'ireo polisiny momba ireo tranga ireo ny porofo — nokendrena tifitra izy ireo.
Na nilaza mazava tsara aza i Griffith fa tsy handefitra amin'ny fandikàna lalàna avy amin'ny mpikambana ao amin'ny sampandraharan'ny polisy izy, nitarika ny mpanao gazety Sunity Maharaj hanolotra ny sosokeviny toy izao izany fombany izany:
Na dia maniry ny mifanohitra amin'izany aza isika, tsy valin'ireo valimbavaka ho antsika i Gary Griffith fa fambaran'ny tsy fahombiazantsika. Ao anatin'ny fotoana hatahorantsika be indrindra, nanetsika azy isika ary namelona azy mba ho fiarovana amin'ireo hery noforonintsika. Toy ny Phoenix, nitsangana avy tany amin'ireo kaokan'ny andrim-panjakantsika rava izy, nahery sy lehibe toy ny tahotra nandindona teo amin'ny tany. […] Voahitsok'ireo mpanao heloka bevava, nahita ny firaisana nasionaly ihany isika ny farany tao anatin'ny mpitarika iray izay mampanantena ny hanavotra antsika ao anatin'ny lohasahan'ny fahafatesana izay nandehanantsika tamim-pifaliana, ny maso nivandravandra, mba hitady tombontsoa.
Eny tokoa, manahy ireo sasany mpampiasa tambajotra sosialy – avy amin'ny Facebook mankany amin'ny WhatsApp – fa lasa mifantoka loatra amin'ny fahitana an'i Griffith ho toy ny mpamonjy ny ady amin'ny fanaovana heloka bevava, raha tokony hifantoka amin'ny fanamafisana ny sampandraharahan'ny polisy iray manontolo.
Te hahafantatra ihany koa ny fotoana hanombohan'i Griffith hiady amin'ny tena “trondro vaventy” ny vahoaka, na dia nihevitra aza i Daurius Figueira, olona iray mpandinika ny resaka heloka bevava, hoe tsy hafa ity fisamborana miavaka ity fa “mpandraharaha iray tsy miankina andalam-pirodanana fotsiny ihany”.
Tao anatin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny Wired868, nanazava i Keston K. Perry:
Niteraka famoronana sehatra hahafahan'ny olona mpiremby vahoaka toa an'i Griffith hipoitra sy hahazo firaiketampo amin'ny fomba haingana tsy misy fanamarinana ny zava-mitranga ny tsy fahampian'ny fandraisanantsika anjara mavitrika ao amin'ny demokrasiantsika – tadidio, vao efa-bolana monja izy no kaomiseran'ny polisy.
Tsy misy na iza na iza, na mavitrika sy tsotra tahaka ny inona aza, hitondra fanovàna fototra sy manan-danja ao amin'ny iray amin'ireo andrim-panjakana tena tsy mandeha amin'izay laoniny indrindra ato amin'ny firenentsika ao anatin'ny fotoana fohy tahak'izany. Mila dingana nosainina sy stratejika kokoa ny fanovàna ara-drafitra.
Hatreto aloha na izany aza, toa mionona amin'izay tsara indrindra vitan-dry zareo ireo Trinbagoniàna: mitady hatsikana ao anatin'ny toejavatra sarotra. Tonga haingana sy nasiaka ireo sary hatsikana ary samy nikendrena ilay Kaomisera Griffith sy ny Minisitra Young.
Saingy mety ho tsy zavatra mampihomehy ireo fiantraikan'ny fitopatopan'ny fomba fiasan'i Griffith amin'ny ankapobeny — ary indrindra ity firodànan'ny zava-mahadomelina ity—.
Trinite sy Tobago 4 andro izay
Anguilla 2 herinandro izay